सफल होला साक्षरता अभियान ? | Bishow Nath Kharel
सफल होला साक्षरता अभियान ?
Posted on October 28, 2012 by bishownath
काठमाडौ, कार्तिक १२ – साक्षरतालाई आय आर्जनसित नजोडा सफल हुन नसकेको यथार्थ हुँदाहुँदै सरकारले फेरि ‘साक्षर नेपाल अभियान’ घोषणा गरेको छ । तथ्याङले ४० लाख ५० हजारभन्दा बढी नागरिक निरक्षर रहेको देखाएको छ । यो निरक्षर उमेर समूह १५ देखि ६० वर्षको हो । सरकारले अवधारणापत्रमार्फत् तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्न यो अभियान थालेको हो । सन् २०१५ सम्म ‘सबैका लागि शिक्षा’ अभियान जारी छ । सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यअनुसार पटक पटक नाम फेर्दै साक्षरता अभियान सुचारु छ । यस पटक सरकारले अवधारणापत्रमा विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्र शिक्षक र विद्यार्थीको निरक्षरता उन्मुलनको जिम्मेवारी दिने भनेको छ । त्यसैगरी स्थानीय निकाय, योजना आयोगले खटाउने स्वयंसेवक, निजामति, जंगीलगायतका सरकारी कर्मचारी, दलहरु र तिनका कार्यकर्तासमेत जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘साक्षरता अभियान नियमित कार्यक्रमका अतिरिक्त विशेष कार्यक्रमका रुपमा सरकारले निर्णय गरेको हो,’ शिक्षा विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्माले भने, ‘सबै तहतप्का, निकाय र राजनीतिक दलहरुको अगुवाईमा स्वयंसेवाका रुपमा अभियान कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।’
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि ‘राष्ट्रिय साक्षरता अभियान’ सुचारु छ । अभियानको राष्ट्रिय संयोजक प्रधानमन्त्री रहने गरी तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई वर्षभित्र निरक्षरता तामझामसाथ अभियानको घोषणा गरेका थिए । यद्यपि ‘जनवादी शिक्षा’को हवाला दिने माओवादीका प्रथम प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिएनन् । करिब ९ महिनाको शासनसत्ताबाट दाहाल बाहिरिएपछि उनका उत्तवर्ती प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पद र नामै किटेर बृहत् रूपमा पोस्टकार्ड तथा निमन्त्रणापत्रसमेत बाँडेर ‘राष्ट्रिय साक्षरता अभियान’ चलाएका थिए । राजधानी वरपरका आफ्नो चुनावी क्षेत्रका कार्यकर्तालाई केही समय ‘अल्भिmने मेलो’ बनाएका थिए ।
राष्ट्रिय साक्षरता अभियान निर्देशिकाअनुसार हरेक गाविसमा कम्तिमा एकदेखि तीनवटासम्म साक्षरता कक्षा केन्द्र विस्तार गरेका थिए । ती केन्द्रमा आफ्ना पार्टीनिकट कार्यकर्तालाई भर्ती गराएर ३ देखि ६ महिने जागीरसमेत खुवाएका थिए । माधव नेपालको सत्ता बहिरगमनसँगै कार्यक्रम सुस्तायो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले साक्षरता अभियानलाई चलाएनन् । यद्यपि उनकै पार्टीका गंगालाल तुलाधर शिक्षामन्त्री थिए । तुलाधरले पूर्ववर्ती शिक्षाका कार्यक्रम छाडेर आफ्नै शैलीका नयाँ कार्यक्रमको खाका ल्याएर लोकपि्रयता देखाउने कोशिस गरे । तर सत्ताबहिरगमनसँगै ती खाका तुहियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व सरकारले दीनानाथ शर्माले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । माओवादी मन्त्री शर्माले ‘जनवादी शिक्षा’को ‘ज’ समेत उठाएनन् भने चार वर्षदेखि संसदमा शिक्षा विधेयक अडकरहेको छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकार बहिरगमन हुने बेलामा अहिले ‘साक्षर नेपाल अभियान’ को घोषणा भएको छ । विज्ञका अनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार राजनीतिक दलहरुले प्रतिवद्धता जनाए तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन हुनसक्छ । ‘यसका निम्ति सरकारअन्तर्गतका निकाय होस् या राजनीतिक कार्यकर्ता सबैलाई अभियानले छुन सक्नुपर्छ,’ शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘सबैलाई तताउन सकियो र प्राविधिक सहयोग जुट्यो भने निरक्षरता उन्मुखल सम्भव छ
प्रकाशित मिति: २०६९ कार्तिक १२ ०८:४९
Source : http://www.ekantipur.com/nep/2069/7/12/full-story/356642.html